Isitudiyo sembali se-2, Kufuphi naseDowntown, Izilwanyana zasekhaya Wamkelekile - I-Airbnb
Isitudiyo sembali se-2, Kufuphi naseDowntown, Izilwanyana zasekhaya Wamkelekile
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJason And Heather
UJason And Heather yi-Superhost
Ithe nca kwisithili sembali sase-Baker City nje kwiiblokho ezimbini ukuya kwidolophu, uza kuyithanda le studiyo intle, eyenye yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezine ezikwikhaya elihle likaVictoria. Le yindawo ephezulu enekhitshi labucala nebhafu epheleleyo.
I-Palmer ezine inekhitshi elipheleleyo elineoveni/isitovu, i-microwave, isinki, i-Keurig kunye neSorbenots yekofu yasekuhlaleni kunye nendawo yokutyela yabantu ababini.
Yonwabela imuvi ekwibhedi entsha enobukhulu obukumkanikazi ene-smart TV efakwe ngoNetflix noYouTube TV, okanye usebenze kwi-intanethi nge-intanethi ekhawulezayo.
Igumbi lokuhlambela linebhafu/ishawa eneshampu, i-conditioner kunye nomatshini wokomisa iinwele ukuze ungasokoli xa upakisha.
IPalmer ezine ikwinqanaba lesibini lale ndawo inembali kaVictoria enyuka izitepsi, ngoko esi situdiyo senzelwe kuphela abo bangakhathazeki ngokuhamba ngezitepsi.
Ukuba ufuna indawo yokuhlala etofotofo neyabucala kwidolophu yase Baker City, ungaya kwiivenkile zokutyela, kwiivenkile, kwiibhari nakwezinye iindawo, iPalmer ezine yindawo ekulungeleyo!
30" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-Hulu, I-Netflix, intambo yepremiyamu, I-Roku
Indlu yePalmer igcinwe kwisithili esiyi-Baker City esikufutshane nedolophu apho uza kufumana izindlu ezininzi ezinkulu zesitayile se-Victoria ezakhiwe ekuqaleni kuka-1900 's ngexesha lokuxakeka kwegolide. Eli gumbi linomtsalane liza kukubuyisela umva ngezinto onokuzisebenzisa esizithandayo nesizithandayo namhlanje!
Umbuki zindwendwe ngu- Jason And Heather
Silapha ukuze siqinisekise ukuba uthi zava ngexesha lokuhlala kwakho kwaye sikhona ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo iiyure eziyi-24 ngosuku.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Baker City